Ivo Amai Vese Databases | Martech Zone
Chitatu, July 22, 2009 Svondo, Kubvumbi 24, 2016 Douglas Karr
Wow, amai vezvose dhatabhesi. Internous chirongwa chekutora uye kuronga zvese dhatabhesi pasi rose. Apo Matt paakatanga kundiudza zvaaive achishanda pairi, maziso angu akaita kunge akapenya nekuda kwehukuru hwesimba rekutanga.
Kubva kune Yemukati Saiti:
Iyo Internet Inotsvaga Nharaunda Nhamba (ISEN) ndeyevatsvagiri vanoona zvichinetsa kuwana nekutsvaga kwakakodzera, kuongororwa online dhatabhesi. Iyo ISEN ndiyo hwaro hwenzvimbo inonzwisisika inonyora zvinyorwa zveInternet. Kusiyana neYahoo kana Google uye mamwe maseru ayo akakosha index index chikamu cheanogara achichinja mawebhusaiti, ISEN inotarisa pane iyo niche yekunyora dhatabhesi. ISEN inobatsira kuwana uye inowedzera kukosha nekugadzira zvinoshanda uye zvinoshanda zveInternet zviitiko.
Tags: database kataroguinternet dhatabhesiinternousisenmatt theobald
Sep 17, 2009 na3: 35 PM
Isu tatsvaga IARPA mari kuburikidza nechipo kuburikidza neDartmouth College neHarvard maraibhurari ekurapa. Ipa iyo mwedzi miviri uye isu tinofanira kuziva!